द्वन्द्वको घाउ : १५ वर्षदेखि अनुपाको दिमागमा छर्रा - BirtaJyoti
द्वन्द्वको घाउ : १५ वर्षदेखि अनुपाको दिमागमा छर्रा
adminApril 3, 2018 12:00 am 0
बिर्तामोड । ०५७ सालतिरको कुरा हो– ओखलढुंगाको कुइभिर माविमा कक्षा–९ मा पढ्दापढ्दै जनयुद्धमा होमिइन्, अनुपा राई ।
उनीमात्र होइन, त्यतिबेला उनलाई पढाउने शिक्षकसहित १५ जना एकैपटक माओवादीमा प्रवेश गर्दै युद्धमा होमिए ।
‘केटाकेटी बुद्धि थियो, जानेर भनौँ या नजानेर, लागियो माओवादीमा,’ उनी भन्छिन्, ‘मसहित मेरो कक्षाका साथीहरु र हामीलाई पढाउने सर एकैपटक गएका हौँ ।’
हाल पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–७ मा बसोबास गर्दै आएकी अनुपा ३१ वर्षकी भइन् । उनी माओवादीमा प्रवेश गरेयताको कहानी भने सुखद् छैन ।
माओवादीमा उनी छापामार थिइन् ।
युद्धकालमा उनले ठूल्ठूला ५ वटा लडाईं लडिन् ।
०५८ को १० मंसिरमा सोलुखुम्बु सदरमुकाम, २२ माघमा काभ्रेको भकुण्डेबेँसी, ०५९ को २४ वैशाखमा संखुवासभाको चैनपुर, भदौमा सिन्धुलीको भिमान र कात्तिकमा ओखलढुंगाको रुम्झाटारमा उनले युद्ध लडेकी हुन् ।
यी ५ युद्धमध्ये तेस्रोले अनुपालाई ठूलो चोट दियो ।
०५९ साल २४ वैशाखमा संखुवासभाको चैनपुरमा आक्रमण गर्दा उनी घाइते भइन् । शरीरको विभिन्न भागमा विष्फोटक पदार्थको छर्रा लाग्यो ।
लडाईं गर्दागर्दै उनी सेनाले थापेको बंकरभित्र परिन् । ‘साथीहरुले जसोतसो बंकरबाट निकालेर त भगाए,’ उनी स्मरण गर्छिन्, ‘तर, दुस्मनले झनै आक्रमण गर्न थालेपछि मलाई लैजान सकेनन्, त्यहीँ छाडेर भागेछन् ।’
साथीहरुले छाडेर भाग्दा अनुपा बेहोस थिइन् ।
तत्कालीन नेपाली सेनाले पनि उनलाई देखेन । अनुपाको मृत्यु भइसकेको ठानेर पार्टीले सहिद घोषणा ग¥यो । तर, २१ दिनपछि उनी होसमा फर्किइन् । स्थानीयबासीको सहयोगमा उनले पार्टीका साथीहरुसँग सम्पर्क गरिन् । पार्टीले उनलाई लिएर गयो ।
यो घटनापछि पनि उनले २ वटा लडाईं लडिन् ।
०५९ को भदौमा सिन्धुलीको भिमान र कात्तिकमा ओखलढुंगाको रुम्झाटारमा लडेको युद्ध त्यसपछिका हुन् । तर, संखुवासभाको चैनपुरमा लडाई गर्दाको पीडा उनले अझै बोकिरहेकी छिन् ।
उनको शरीरमा अझै विष्फोटक पदार्थको छर्रा छन्, जुन उनले निकाल्न सकिनन् ।
‘०७० सालको वार्ताका बेला काठमाडौँमा उपचार गराउन गएँ, डाक्टरले छर्रा निकाल्नै सकेनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै दिन पार्टीले हेर्ला भन्ठानेर फर्किएँ, पार्टी पटक–पटक सरकारमा पनि पुग्यो, मैले उपचार पाइनँ ।’
टाउको, घाँटी र छातीमा गरी ६ वटा छर्रा रहेको उनी बताउँछिन् ।
डेढ दशकदेखि शरीरमा छर्रा बोकेर जीवन संघर्ष गरिरहेकी अनुपालाई त्यही छर्राले बाहै्र मास सताउँछ । ‘गर्मीमा साह्रै पोल्छ, जाडोमा कट्कटी खान्छ, असाध्यै पीडा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
०६३ मा छोरो रोविन विक्रमको जन्म भएपछि उनी माओवादीमा त्यति सक्रिय छैनन् ।
घरमै बस्न थालिन् ।
त्यसपछि पनि उपचारका लागि धरान, विराटनगर कुदिरहिन् । तर, कतै पार लागेन । पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो समस्या राख्न पनि छाडिनन् उनले ।
‘तपाईंको बारे हामी चिन्तित छौँ’ भन्ने जवाफ पाउँथिन् उनी । उनले अहिलेसम्म पार्टीबाट केही पनि राहत पाइनन् । उनले पटक–पटक बिन्ति बिसाएका नेतामध्येका श्रीप्रसाद जवेगु राज्यमन्त्री भए, ईन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ अहिले एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् ।
उनको परिवारको आर्थिकस्तर समेत राम्रो छैन ।
श्रीमान मनकुमार राई पनि त्यतिबेला माओवादी आन्दोलनमै थिए । पारिवारिक आर्थिक स्थितिका कारण हाल उनी मलेशियामा श्रम गरिरहेका छन् । १२ वर्षका छोरा रोविन विक्रम राई सरकारी स्कूल पढ्दैछन् ।
बी एण्ड सी ले निःशुल्क उपचार गर्ने
बिर्तामोडको बी एण्ड सी टिचिङ हस्पिटलले अनुपाको निःशुल्क उपचार गर्न सुरु गरेको छ । बी एण्ड सीका न्यूरो सर्जन डा. पंकज नेपालले मंगलबार उनको शल्यक्रिया गर्दैछन् ।
‘उहाँको एउटा छर्रा जटिल ठाउँमा छ, त्यो छर्राले दिमागलाई छोएको छ,’ डा. पंकजले भने, ‘मान्छेको
दाहिने दिमागले देब्रेलाई कन्ट्रोल गर्छ, देब्रेले दाहिनेलाई । उहाँको दाहिने दिमागमा छर्रा छ, त्यसैले देब्रे दिमाग लाटो भएर बसेको छ ।’
डाक्टरका अनुसार छर्रामा धातु भएकाले गर्मीमा त्यो तात्छ ।
दिमागभित्रको छर्रा गर्मीमा तातेपछि अनुपालाई असर गरिरहेको डाक्टर पंकजले बताए । ‘यो छर्रा निकाल्न सम्भव छ, हामीले पहिले पनि यस्तै ठाउँमा भएको छर्रा निकालेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो एकदमै जटिल शल्यक्रिया हो, म ४ जनाको टिम लिएर जान्छु, झन्डै १० घण्टा समय लाग्छ ।’
अनुपाको घाँटी र दिमागमा भएको छर्रा मात्र निकाल्न लागेको उनले बताए ।
‘अन्तको छर्राले खासै दुःख दिएको रहेनछ, त्यसैले अहिलेलाई २ वटा छर्रा मात्र निकालिन्छ,’ उनले भने ।
अनुपाले यति धेरै पीडा सहेर वर्षौदेखि बसेको थाहा पाएपछि आफूले निःशुल्क उपचार गर्ने अठोट लिएको बी एण्ड सी टिचिङ हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले बताए ।
‘यिनको लडाईंले मुलुकमा परिवर्तन आयो, तर उनको घाउ अझै जस्ताको तस्तै छ,’ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, ‘यो थाहा पाएर मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो, त्यसैले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेँ ।’
समानुपातिकमा कस्तो आयो झापाको नतिजा ?
admin- December 18, 2017
भद्रपुर । झापामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना कार्य सकिएको छ । सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु गरिएको मतगणना बिहीबार सकिएको हो । समानुपातिकको अन्तिम ... Read More
बृद्धको सुन र नगद लुट्ने हिङमाङ यसरी परे पक्राउ
झापा, ३ पुस सुन तथा नगद चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पाँचथरको साविक नागी गाविस वडा नम्बर–३ घर ... Read More
सलमान खानको नेपाल भ्रमण स्थगित
admin- March 2, 2018
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । विप्लव समूहको चेतावनीलाई कारण देखाउँदै सलमानले नेपाल नआउने सन्देश पठाएका हुन् । ... Read More
NEWER POSTसाहित्य क्षेत्रका गलत परम्परा (१)
OLDER POSTगृहले रोक्यो २२ हजार प्रहरीको थप दरबन्दी
मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न हुदैँछ यस्तो तयारी
झापामा ३० प्रतिशत मत खस्यो
दूधको नयाँ मापदण्ड तयार